China White iphepha ibhegi Flat yakutya mveliso kunye nabenzi | Hong Bang
Njengoko abantu behlawula ngakumbi nangakumbi kukhuselo lokusingqongileyo, izinto zokupakisha ezinobuntu ziyaveliswa. Ukupakishwa kwezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ikakhulu kuxhomekeke ekupakisheni okwenziwe ngezinto ezinje ngephepha, i-poly lactic acid, kunye nezinto ezisekwe kwizinto eziphilayo ezinokubola zizidalwa zendalo. Ngokwesiqhelo, isikhwama sokuma sisebenzisa ikakhulu ukutya okulula, iti okanye ikofu.
Ingxowa yePhepha eliMhlophe enefestile
Icala lephepha le-Kraft elixhonyiweyo kunye ne-Stand Up yakuthengiswa yenziwe ngezinto ezininzi ezinokuhlulwa zibe ngamaqela aphambili ama-3, ahlanganisanayo ukubonelela ngengxowa eneempawu ezizinzileyo nezinganyangekiyo. La maqela ma-3 a:
Egqithileyo Ingxowa yephepha leKraft yokuPakisha kweKofi kunye neTi